အရူးထခြင်း | PoemsCorner
ကျွန်မ ဒီနေ့ အိပ်ယာက နိုးတော့ … ၇ နာရီကျော်နေပြီ … ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ယာသိမ်းပြီး …. ရုံးသွားဖို့ ပြင်ဆင်ရတော့တာပေါ့ … ရုံးသွားဖို့ ပြင်တာက ကျွန်မတစ်ကိုယ်ရေ ကိုပဲ ပြင်ရတာပါ … ထမင်းချိုင့် …. မနက်စာကို အမေက ပြင်ပေးပြီးသားလေ .. အဲဒီတော့ လှလှပြင် … မနက်စာ စားပြီး ကားဂိတ်သွားပြီလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါတော .. အလှပြင်တာကိုတော့ ကျော်လိုက်ကြတာပေါ့ .. …
ကျွန်မတို့က သာကေတမှာနေတာလေ … သာကေတ ကားပေါပါတယ် …. ကားပေါသလောက် လူဦးရေ ထုတ်လုပ်နှုန်းကလည်း များတယ်ထင်တယ် … 🙂 …. လာတဲ့ကားတိုင် လူအပြည့် … တစ်ခုပဲ ကားတွေက နည်းနည်း လူစဉ်မမှီဘူးဆိုတော့ (သေးတာကိုပြောတာပါ) .. ဘယ်လောက်မှ လူမတက်ရသေးဘူး ကျပ်နေပြီ …. ဒါကတော့ နေ့တိုင်း တွေ့နေကြပါ … …. ဒီနေ့ ကျွန်မ ကားဂိတ်ရောက်တော့ …. ကံကောင်းတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ရမလားပေါ့နော် .. ကားက သိပ်မကျပ်ဘူး … အဲဒါနဲ့ .. ကျွန်မ ကားပေါ်တက်လိုက်တယ် … ကျွန်တို့ စီးတဲ့လိုင်းကားတွေက ခုံတွေက နောက်မှာ တစ်တန်း … ဘေးတစ်ဘက်စီမှာ အတွင်းဘက်ကို မျက်နှာမူပြီး ခုံတန်းရှည် တွေထားတယ် … အဲဒီခုံတန်းရှည်တွေ ထိုင်တဲ့လူတွေရှေ့မှာ မက်တက်ရပ်လို့ရတယ် နေရာမှာ ကျွန်မရပ်လိုက်တယ် .. ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ညာဘက်မှာ ကောင်းမလေးတစ်ယောက် … ဘယ်ဘက်မှာ ကောင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် …. ဒီလိုနဲ့ စီးလာလိုက်တာ …. ၂ မှတ်တိုင်လောက်ရောက်တော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တက်လာတယ် … အမျိုးသမီးဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ … သူက ဘယ်မှာလာရပ်လဲဆိုတော့ ကျွန်မ ညာဘက် နေရာမရှိတဲ့နေရာကို အတင်းဝင်ရပ်ပါတယ် … ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ပဲပါ .. ကျွန်မကို အတင်းတွန်းထိုးပြီးတော့ရပ်နေတာ … ဟင်း ဟင်း .. ကျွန်မဒီနေ့ စိတ်ကို ရှည်အောင်ထားမယ်လို စိတ်ကူးထားတာပါ .. ကားစီးရင်းနဲ့ ဘုရားစာဆိုတဲ့အကျင့်ကလည်း ရှိတော့ ဘုရားစာဆိုပြီ စိတ်မဆိုးချင်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် ကျွန်မတိုးပေးလိုက်ပါတယ် … ဟေ့ာ တစ်ခါ သူက ကျွန်မသည်းခံနိုင်စွမ်းကို စမ်းပြန်တယ် …. တံတောင်ဆစ်ကို ကားပြီးအပေါ်တန်းကို ကိုင်ပါတယ် …. ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါအုံး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဒီလောက် ကပ်နေတာကို … တံတောင်ဆစ်ကို ကားကိုင်တော့ ကားများဘရိတ်အုပ်လိုက်ရင် … ကျွန်မမျက်နှာကို ဒုန်းကနဲ့ပဲ ထိမှာ .. ထိတော့ မထိပါဘူး… ကြိုကာရတာပေါ့နော် .. သူ့ကိုလည်း ကာရသေး .. နောက်က ရပ်တဲ့လူက အရမ်းပိရင်လည်း တောင့်ခံထားရသေး … မတောင့်ပြန်ရင်လည်း ရှေ့က ထိုင်နေတဲ့လူနဲ့က …. ဟင်း ဟင်း …. မသင့်တော်ဘူးလေနော် …. ကျွန်မမှာ သည်းခံတယ်သာ ပြောပါတယ် ဘုရားစာက ဆိုသာဆိုနေရတယ် ဘယ်နှစ်ခေါက်ရောက်သွားမှန်းကို အာရုံက မရတာ … ရှိသေးတယ် သူ့ထမင်းချိုင့်က ပူနေတာလေ … ဆင်းခါနီး ကပ်လုပ်သွားသေးတယ် … သူ့ထမင်းချိုင့်ကို ကျွန်မလက်မောင်းနားကပ်ထားလိုက်သေးတယ် .. ဘယ်လိုပြောမလဲ သည်းခံတာတော့လည်း မဟုတ်ဘူး .. ပြောရင်လည်း ကားပေါ်မှာ …. မကောင်းဘူးလေ … ကျွန်မ အရမ်းသည်းခံတတ်တဲ့လူတော့ မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် နည်းနည်းချင်း ပြင်တာပေါ့နော် .. ဟီ .. သူအတင်းတိုးတော့ ကျွန်မ နေရာတိုးပေးလိုက်ရတုံးက ကျွန်မတွေးလိုက်တဲ့ အတွေးက အကြီးကြီး .. ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဒီလို “” အော် .. ဒီနေရာလေးလောက်ကတော့ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး … အချိန်ခဏလေးပဲ စီးရမှာ ဒါကို ငါက တွယ်ကပ်နေသင့်လား … “” ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ နော် …. နောက်မှ တဖြည်းဖြည်း သတ်ချင်လာ တာ ….(ဟီး ဟီး ) ကျွန်မပြောချင်တာက အခုခေတ်လူအများစု ကျွန်မအပါအ၀င် .. တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့နေရာမှာတောင် သူတစ်ပါးကို ဦးစားမပေးချင်ကြဘူး .. အဲဒီလို သေးသေးလေးတွေမှာတောင် မစွန့်လွှတ်နိုင်တာ တကယ့်အကြီးကြီးသာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ … အခု ကျွန်မကိုပဲကြည့်လေ … ကျွန်မနေရာ ထိုင်စရာတောင်မဟုတ်ဘူးနော် မတ်တပ်ရပ် အဲဒါကို ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ သည်းခံ သည်းခံ လို့ပြောနေရင်းနဲ့ ဒီစာရေးဖြစ်တာပဲ ကြည့်လေ … အခု ကျွန်မတို့ ဘတ်စ်ကား တိုးစီးနေတဲ့လူတွေထဲမှာ … နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ရာထူး၊ ဂုဏ်ရှိန်တွေသာ ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် … လောဘကင်းကင်းနဲ့ ဖတ်တွက်နိုင်ပါ့မလား ….. ဒါကျွန်မရဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်း အတွေးစိတ်ကူးပါ ……
(ဘာတွေလဲမသိဘူးဆိုဘူး … ဆဲတော့ မဆဲသွားပါနဲ့နော် … ဟီး … ရူးနေတယ်ထင်တယ်ဆိုတော်သေးတယ် 🙂 😛 )
In: Others Posted By: thandar Date: Oct 12, 2012
ဇွန်ထဲက ခွန် နွံထဲက ကျွန် (သို့) ၁၀၁% အရူးထခြင်း
အချစ်တစ်ခု စွန့် လွှတ်ခြင်း
!! တစ်ယောက်သောသူအတွက်ငါ့ချစ်ခြင်း !!
Leave comment No comment & 199 views